May 18, 2020 - Alinnpya
ဒီအချက်တွေဖြစ်နေရင် သင်ဟာ စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနေပြီမို့ ခဏလောက်အနားယူသင့်ပါတယ်
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on ဒီအချက်တွေဖြစ်နေရင် သင်ဟာ စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနေပြီမို့ ခဏလောက်အနားယူသင့်ပါတယ်
လူတွေဟာ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေကိုယ်စီရှိကြပြီး အဲ့ဒီရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်အောင် ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတရံမှာ ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ချင်၊ရှေ့မဆက်ချင်တော့ဘဲ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းနေတတ်ပြီး အခုလိုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် …။ (၁) ရည်မှန်းချက်ပျောက်နေတယ် ပုံမှန်အတိုင်းကြိုးစားနေရင်းက ဘာအတွက်ကြိုးစားရမှန်းမသိတော့ဘဲ ရည်မှန်းချက်တွေဝေဝါးလာနေတယ်။ ရှေ့ဆက်ပြီး ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်မှန်းမသိတော့သလို၊ ဘာမှလည်းဆက်မလုပ်ချင်တော့တာမျိုးပေါ့။ ကိုယ်လုပ်နေတာတွေက အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူးလို့ ထင်နေတာမျိုး။ အဲ့ဒါက စိတ်ရောလူပါ ပင်ပန်းနေတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ (၂) ဘာခံစားချက်မှမရှိဘူး နေ့စဉ်နဲ့အမျှ စိတ်ခံစားချက်မရှိတဲ့သူတစ်ယောာက်လိုဖြစ်နေပြီး […]
ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးနှင့်သံဃာတော်များကို စော်ကားသူကိုယ်တိုင်မပါပဲ ကိုယ်စားတောင်းပန်၍ ထီလာသားများမကျေနပ်ဟုဆို
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးနှင့်သံဃာတော်များကို စော်ကားသူကိုယ်တိုင်မပါပဲ ကိုယ်စားတောင်းပန်၍ ထီလာသားများမကျေနပ်ဟုဆို
ဗုဒ္ဓဘာသာ နဲ့ သံဃာထုတရပ်လုံးကိုမကြားဝံ့မနာသာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာများနှင့်အခြားစွပ်စွဲစော်ကားမှုဖြစ်ပွား 18/5/2020 12:15နာရီ (ထီလာ) နိုင်ငံတော် အဆင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့်သံဃာထုတရပ်လုံး (ပါချုပ်ဆရာတော်အပါဝင်)ကို လိင်ပိုင်းဆိုင် ရာနှင့် အခြား စွပ်စွဲစော်ကားမှု ကျူးလွန်ခဲ့သော Kyaw Win Thant acc ပိုင်ရှင်မှ ရေးသားခဲ့ရာမှာ ကာယကံရှင် မပါကိုယ်စားတောင်းပန်မှုကိုးနဝင်းကျောင်း (ထီလာ) မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုလို ကိုယ်စား တောင်းပန်မှုပြု လုပ်ရာမှာ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်မပါသောကြောင့် တက်ရောက်လာသည့် ထီလာမြို့လူထုမှ ကျေနပ်မှု […]
မီတာဖတ်စာရေးများ မီတာဖတ်ရာတွင် တိကျမှန်ကန်စေရန် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on မီတာဖတ်စာရေးများ မီတာဖတ်ရာတွင် တိကျမှန်ကန်စေရန် လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
မီတာဖတ်စာရေးတွေအနေနဲ့ မီတာဖတ်ရာမှာ တိကျမှန်ကန်စနစ်ကျစေဖို့၊ လျှပ်စစ်မီး သုံးစွဲသူတွေရဲ့ အခက်အခဲတွေတိုင်ကြားနိုင်မယ့် ဖုန်းနံပါတ်တွေကို လူသွားလူလာများတဲ့ နေရာတွေမှာ ချိတ်ဆွဲဖို့နဲ့ မီတာဖတ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာပြည်သူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ လျှပ်စစ်နဲ့ စွမ်းအင်ဝန်ကြီးက တိုက်တွန်း ပြောပါတယ်။ မေလ ၁၇ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ ၂၀၁၉-၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဒုတိယသုံးလပတ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်က ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်အားခကျသင့်ငွေတွေ ပေးဆောင်ရာမှာ လူစုလူဝေးဖြစ်တာကို အထိုက်အလျောက် လျော့နည်းစေဖို့ မတ်လအတွက် […]
ကျောင်းသင်ရိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးပါ ထည့်ပြီး စော်ကားမိခြင်း နှင့် ပြန်လည်တောင်ပန်ခြင်း
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on ကျောင်းသင်ရိုးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီးပါ ထည့်ပြီး စော်ကားမိခြင်း နှင့် ပြန်လည်တောင်ပန်ခြင်း
မူလ ရေးသားတင်ပြခဲ့သော စာများနှင့် ကွန်မန့်များ အဆိုပါ ကောင့်ပိုင်ရှင်မှ တောင်းပန်ထားခြင်း မိတ္ထီလာ မြို့မိမြို့ဖများနှင့် သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းအားတောင်းပန်ခြင်း ၁၇.၅.၁၉ တွင် ကျွန်တော်သည် ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန မှ ထုတ်ပြန်သော ကျား/မ (လိင်ပညာရေး ) နှင့်ပတ်သက်ပြီး ‌ေ၀ဖန်ရေးသားခဲ့ရာ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကို ထိခိုက်စေသော စကားလုံးများ များစွာ ပါ၀င်သွားခဲ့ပါသည်။ ထိုကိစ္စကြောင့် မိတ္ထီလာ မြို့မိမြို့ဖ များနှင့မြို့နေသံဃာအဖွဲ့အစည်းမှ စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့ဖွယ် ဖြစ်ရကြောင်း […]
အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးရဲ့ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on အသက်(၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးနှင့် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တာလို့ နာမည်ကြီးနေတဲ့အသက်(၁၃)နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးရဲ့ ဖွင့်ဟ ဝန်ခံချက်
ပီးခဲ့တဲ့နှစ် နှောင်းပိုင်းက တစ်ကမ္ဘာလုံးက သတင်းမီဒီယာတွေထက်မှာ ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ် ရှိခဲ့ပါတယ်။ အသက်(၁၀)နှစ်သာရှိသေးတဲ့ ကောင်လေးကြောင့် (၁၃)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေးမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကောင်မလေးကို ဆေးပညာရှင်တွေက သေချာ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ တကယ်ကိုယ်ဝန်ရှိနေတာ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်အရ ဆယ်နှစ်ကောင်လေးဟာ ကလေးရအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အရွယ်ကို မရောက်သေးဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ဒေါက်တာတွေက ဒီကိုယ်ဝန်ဟာ တခြားသူကြောင့် ဖြစ်ရမယ်၊ ဒီ(၁၀)နှစ်အရွယ် ကောင်လေးကြောင့် လုံးဝ […]
ကော့သောင်းတွင် Quarantine ဝင်နေသူအားလာတွေ့သူထံမှ စိတ်ကြွဆေးများဖမ်းမိ
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on ကော့သောင်းတွင် Quarantine ဝင်နေသူအားလာတွေ့သူထံမှ စိတ်ကြွဆေးများဖမ်းမိ
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ကော့သောင်းမြို့မှာ မေလ ၁၇ ရက် ညနေပိုင်းက Quarantine ဝင်နေသူကို လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဧည့်သည် အမျိုးသား ၁ ဦးထံကနေ WY စိတ်ကြွ မူးယစ်ဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ ကောင်းသောင်းရဲ စခန်းတာဝန်ခံ ဦးဇော်မင်းက ပြောပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံအချုပ်ကနေ ပြန်လွတ်လာပြီး အဏ္ဏဝါရပ်ကွက် အထကခွဲ ကျောင်းမှာ Quarantine ဝင်နေတဲ့ နေရပ်ပြန်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ကော့သောင်း​ဒေသခံတွေကို လာရောက်တွေ့ဆုံတဲ့ ဧည့်တွေ့သူဆီကနေ ဆေးပြားတွေ ဖမ်းဆီးရမိတာပါ။ ဧည့်တွေ့လာတဲ့ […]
တကယ့်လူသားအစစ်လို ချောမောလှပလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးစက်ရုပ် ( ရုပ် / သံ )
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on တကယ့်လူသားအစစ်လို ချောမောလှပလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးစက်ရုပ် ( ရုပ် / သံ )
နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ တကယ့်လူသားလား၊ စက်ရုပ်လားဆိုတဲ့ မကွဲပြားမှုက ပိုမိုတိုးမြှင့်လာနေတယ်လို့ မေရာသတင်းတပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ရုပ်သံထဲမှာတွေ့ရတဲ့ အလွန်ချောမောလှပတဲ့ တကယ့်လူသားအစစ်လို အမျိုးသမီးစက်ရုပ်က သင့်ကို လူလား၊ စက်ရုပ်လားဆိုတဲ့ အမြင်မကွဲပြားမှုကို လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေပြီး တကယ့်လူသားစင်စစ်လို အထင်ရောက်စေမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ တိုကျိုမြို့မှာကျင်းပတဲ့ ဂိမ်းပြပွဲမှာ ခင်းကျင်းပြသထားတဲ့ မိန်းကလေးစက်ရုပ် ဗွီဒီယိုရုပ်သံကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ် တင်ခဲ့ရာမှာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း ၃ သန်းကျော် ရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု မိန်းကလေးစက်ရုပ်နဲ့အတူ […]
လူတစ်ဦး သရက်ပင်ပေါ်မှ ခုန်ချ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on လူတစ်ဦး သရက်ပင်ပေါ်မှ ခုန်ချ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
17,5,2020 (16:20) အချိန်ကရင်ပြည်နယ် ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့ အမှတ်၅ ရပ်ကွက်ဗိုလ်ချုပ်လမ်း တိုင်ရင်ဆေးခန်း အရှေ့ သစ်ရက်ပင်တွင်နေ့လည် ၂ နာရီထဲက ၎င်းသည် သစ်ပင်ပေါ်တက်နေလျက်ရှိရာ မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ နှင့် လူအများ အောက်ဆင်းလာရန် ပြောနေချိန်မှာ သစ်ပင်ပေါ်မှ လမ်းမပေါ်သို့ ဒိုင်ပင်ထိုးဆင်းခဲ့ရာ ဦးခေါင်းဖြင့် ကျသောကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ သေဆုံးသူ အမည်မှာမောင်စိုးထိုက် အသက် (၂၆)နှစ်ရန်ကုန်တိုင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်က ဖြစ်ပါသည်။လက်ရှိ နေရပ်လိပ်စာက ဘုရားသုံးဆူမြို့ အမှတ်၄ ရပ်ကွက်မှ လို့သိရပါသည်။ […]
လျှပ်စစ်မီတာခများ ကျေနပ်မှုမရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on လျှပ်စစ်မီတာခများ ကျေနပ်မှုမရှိပါက တိုင်ကြားနိုင်
လျှပ်စစ်မီတာခများ ကျေနပ်မှုမရှိပါက သမ္မတရုံးနှင့် အတိုင်ပင်ခံရုံးအထိ တိုင်ကြားနိုင် ဓာတ်ပုံ-မြင့်မိုးညို (လတ်တလောတွင် မီတာခကိစ္စကို အတိုင်ပင်ခံရုံးအနေနှင့် ပြန်လည်စဉ်းစား သုံးသပ်ပေးမည့်အစီအစဉ် မရှိသေးဟုဆိုသည်) လျှပ်စစ်မီတာခများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျေနပ်မှုမရှိသော ပြည်သူများရှိပါက နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာနရုံးသို့ လိပ်မူတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း သမ္မတရုံး၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက သတင်းထောက်များကို ပြောကြားလိုက်သည်။ လတ်တလောတွင် မီတာခကိစ္စကို အတိုင်ပင်ခံရုံးအနေဖြင့် ပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ပေးမည့် အစီအစဉ်မရှိသေးကြောင်းလည်း ဦးဇော်ဌေးက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ လျှပ်စစ်မီတာခများကို ဧပြီလတွင် ယူနစ် […]
မိန်းခလေးတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ single mother ယဉ်ခိုင်(သဲသဲ)
May 18, 2020 AlinnPya Comments Off on မိန်းခလေးတိုင်း အတုယူဖို့ကောင်းတဲ့ single mother ယဉ်ခိုင်(သဲသဲ)
2.2.2010မှာလက်ထပ်ခဲ့တယ် 24.1.2019မှာကွာရှင်းခဲ့ပီ(သူမနဲ့ပျော်ရွှင်ပါစေ) 9နှစ်ပြည့်ဖို့၈ရက်ပဲလိုတော့တယ်. Anni Dateလဲမှတ်ထားမယ်မထင်…….. နှစ်ယောက်လုံးချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့တယ်. အစပိုင်းမှာအရမ်းတွေသာယာပီးအဆင်ပြေခဲ့တယ်. တပ်ထဲမှာနေရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ တပ်ထဲကသူတွေပဲသိတယ်. ခေတ်ရှေ့ပြေးပီးဖလန်းဖလန်းနေခဲ့တဲ့ကျမ တပ်ထဲမှာ အဘွားအိုလေးလိုနေခဲ့ရတယ်.အဆင်ပြေပါတယ် သူငွေသုံးကြမ်းတာလေးကလွှဲရင်ပေါ့. တဖြေးဖြေးသူ့အချိုးတွေပြောင်းလာခဲ့တယ်. ကျမကိုအရင်လိုဂရုမစိုက်တော့ဘူး. အိမ်လဲမကပ်တော့ဘူး ကျမအိပ်မှပြန်လာတတ်တယ်. တာဝန်ကျတဲ့နေရာက သူပုန်တပ်တွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဖာပွန်မှာပါ ခေါင်ပါတယ် အစားအစာလဲရှားတယ် မီးလဲအချိန်နဲ့ပါ့ ဖုန်းလဲမမိပါဘူး လိုင်းသုံးလို့မရဘူးအဲ့တုန်းကပေါ့. ကျမနေရတဲ့အိမ်က တောင်ကုန်းပေါ်မှာအိမ်လုံးချင်းလေးတွေ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်ကပ်မနေဘူး. တစ်နေ့နေ့သူပြန်အလာကို အိမ်အကျယ်ကြီးထဲမှာ သရဲအရမ်းကြောက်တတ်တဲ့ကျမ ကလေးလေးကိုဖက်ပီး စာင့်နေခဲ့တယ်. သူပြန်မလာတဲ့ညတွေဆို ဘယ်လောက်ခြောက်ခြားခဲ့ရလဲကို့ဘာသာကိုအသိဆုံး. […]